Deeqda Ganacsatada Deegaanka Oo Maraysa 13 Milyan - Cakaara News
Deeqda Ganacsatada Deegaanka Oo Maraysa 13 Milyan
Jigjiga ( Cakaaranews )Arbaco, 6dii April 2016. Kulanwayne ay isugu yimaadeen heerarka kaladuwan ee ganacsatada deegaanka oo ujeedadiisu ahayd xageen kaga hadhaynaa ugurmashada masiibadii dabiiciga ahayd ee daadkii naf iyo maalba waxyeeleyay walaalahanagii danyarta ahaa ee deganaa agagaarka togga dhexmara magaalada jigjiga ayay deeqdoodu maraysaa 13 milyan iyadoo wali sii socota.
Kulankan ay isugu yimaadeen heerarka kaladuwan ee ganacsatada deegaanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada oo uu kamid yahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo kahadlay kulanka ganacsatada ayaa ugu horayn ugu mahadceliyay ganacsatada deegaanka kadamqashada dhibaatada masiibadii dabiiciga ahayd ee ay kuwaxyeeloobeen walaalahood isagoo xusay in shacabka deegaanku uu ku amaanan yahay is-caawinta xili walba. Tanina ay kamid tahay dabeecada diinteena islaamka iyo dhaqanka shacabkeena lagu yaqiinay iyadoo xukuumada deegaanka iyo ta federaalkuba ay kasoo baxeen kaalintoodii gurmadka deg-dega ah qorshaystayna xal-waara si aysan dhibaatadani mar danbe usoo noqonin oo ah in tog caadi ah laga sameeyo qabalaha qoor-dheere ilaa xabaalaha sheekh cali guure, buundooyin, biyo-xidheeno iyo moosas. Wuxuuna madaxwaynuhu tilmaamay in gudi iskudhaf ah oo kakooban xubno ganacsatada kamid ah iyo xubno dabagal ah oo maamula deeqda ganacsatada lasameeyo iyadoo account lagu ururinayo lacagta deeqda ah.
Kadibna mayorka maamulka magaalada jigjiga mudane Axmed Maxamuud Axmed oo kawarbixiyay waxyeelada masiibadaas ayaa sheegay in daadku saameeyay 9 xaafadood oo kamid ah magaalada isagoo dumiyay guryo, qaadayna hanti gaadiid iyo agab isugu jirtay keenayna dhaawac, dhimasho iyo barakac intaba. Wuxuuna mayorku xusay in ciidanka gaarka ah ee DDSI ay noqdeen xalkii masiibada dabiiciga ah xiligay dhacday. Wuxuuna ugu mahadceliyay ganacsatada deegaanka dadaalka deeqda ay ufidinayeen walaalahooda kuwaxyeeloobay masiibadii dabiiciga ahayd.
Si kastaba ha ahaatee, dhimashada ay masiibadaasi keentay oo ahayd 23 xubnood oo 7 kamid ah lala’yahay ayaa waxaa ugu darnaa inta lahayo qoys kakoobnaa 9 xubnood: 6 caruur ah iyo 2 ehelka ah oo ay kajoogaan waalidkii oo kali ah, qoys kakoobnaa 4 xubnood oo aabihii oo kali ah kabadbaaday iyo qaar kale. Waxayna ganacsatadu go’aansatay in qoyska ugu daran lagu caawiyo 4.5 milyan birr oo kamid ah deeqda 13ka milyan ee wali socota meesha qoysaska kale ee soo raaca gudigu uqoondayn doonto.
Dhanka kalana, qaar kamid ah ganacsatada deegaanka oo kahadashay maadasha kulankaasi ayaa sheegay inay hiil iyo hooba lagarab taagan yihiin eheladii iyo qaraabadii ay dadkooda waxyeelaysay masiibadii dabiiciga ahayd iyagoo waliba tacsi tiiraanyo leh udiray.